Postano gbasara Egwuregwu Social Media Command Center | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 12, 2013 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Obere ihe amalitela kemgbe elekọta mmadụ media iwu emmepe kụrụ ebe ahụ. O nwere ike ịbụ na ị gụọla gbasara ha n'egwuregwu mgbe ndị enyi anyị nọ na Radious mepụtara ihe ahụ mbụ na-elekọta mmadụ media iwu center maka Super nnukwu efere na Indianapolis. Igodo nke ebe iwu ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ anọ…
Safety - buru ụzọ zaa nsogbu ma ọ bụ nsogbu ọ bụla dabere na nchekwa.
Service - zaghachi okwu na-adịghị mma metụtara obodo ma ọ bụ ihe omume.
Uche - mara ihe n’eme mgbe na ebe, jide ya ma bipụta ya.
Mmezi - chọta mkparịta ụka dị mma, ma ọ bụ ọdịnaya ndị ahịa dị mma, ma bulie ya.
Teknụzụ emeela ka ikike mgbakwunye ndị ọzọ ugbu a - na onye na-akwado anyị, Postano, bụ onye na-ebute ụzọ n'ịzụlite egwuregwu kachasị elu na-elekọta mmadụ mgbasa ozi iwu ebe dị na mbara ala.
Ebe a na-elekọta ndị mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ebe a na-ejikarị nyochaa, ndị ọrụ ọ bụla ga-aza site na ngwaọrụ ha. Postano emeela ụlọ ọrụ iwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ka ọ dị elu site na iji etiti site na ngwaọrụ nlekota oru na ngwa ọrụ ibipụta akwụkwọ. Postano jikọtara ha Ulo oru, Ebe Iwu, Ihe omume na Mgbidi Ọha na mobile iji mepụta ahụmịhe zuru oke ebe enwere ike ịnakọta ọdịnaya, kọwaa ma bipụta ya niile n'oge!
Ahụmahụ ụbọchị egwuregwu ahụ pụrụ iche, na Sun Devil Athletics na-ezube ịnye ndị Fans anyị ahụmịhe mmekọrịta na Sun Devil Stadium. Site na postano vidiyo na njikọta webụsaịtị, anyị nwere ike ịkọwapụta ọdịnaya ndị ofufe sitere na netwọkụ mmekọrịta dịka Twitter, Instagram, na Facebook na bọọdụ vidiyo n'oge mmemme egwuregwu ASU ma mụbaa njikọ aka onye ọ bụla. Grace Hoy, Social Media Coordinator ASU
Postano, TigerLogic Corporation's social platform, ugbu a na-enye ohere ka mahadum mepụta usoro iwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma jikwa ike mgbasa ozi mmekọrịta nke ndị na-egwu egwuregwu kọleji. Mahadum nke Virginia, Mahadum nke Oregon, Arizona State University, na ndị ọzọ na-eji ngwaahịa Postano agbakwunye ihe mgbaru ọsọ na ohere ndị ọzọ na ngalaba mgbasa ozi mgbasa ozi:
collection - ikike iji kpokọta ihe anya (foto na vidiyo) na ezigbo oge.
Mmezi - ikike nkewa, nkpado na nyo data na-abata maka ojiji.
Display - gosipụta ihe mgbasa ozi mgbasa ozi na-amasị ndị na-elekọta mmadụ na onyonyo n'oge egwuregwu bọọlụ kọleji.
Netwọk mmekọrịta bụ ọwa mgbasa ozi ndị ama ama ama ama maka ndị egwuregwu egwuregwu kọleji itinye aka, ime mmemme na ịkekọrịta oge egwuregwu dị egwu n'oge egwuregwu na ihe omume ndụ. Mgbe Fans hụrụ foto ha, vidiyo, na ozi ha si na Instagram, Twitter, Facebook, Vine na ndị ọzọ gosipụtara na nnukwu enyo mgbe mmemme ahụ, itinye aka na nsonye ndị ọzọ pụtara nke ọma site na ndị ọzọ. Ọrụ dị elu na-aga n'ihu na weebụ yana ọbụna na-abawanye njikọ nke ndị Fans ahụ na-agaghị, na-eduga, n'oge, na mgbe ụbọchị egwuregwu gasịrị.
Postano na-enye ụlọ akwụkwọ ndị ọhụụ ohere ịnye ndị otu ha echiche zuru oke banyere mkparịta ụka ndị a, na-ewulite mmekọrịta bara uru, ogologo oge site na iji ngwakọta nke ihe ngosi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na weebụ, n'ime ngwa mkpanaka, yana nnukwu ngosipụta edobere na ọnọdụ dị iche iche na-eweta ọdịnaya mmekọrịta na ụzọ ọhụrụ dị egwu n'oge mmemme egwuregwu.
Na mgbakwunye na ngwaahịa ndị a, Postano na-enye nhọrọ nhazi omenala n'ihi na ezigbo mahadum ika ahụmahụ na-aga na-akwado nke anụ ahụ ngosipụta na Monitors na ọnọdụ. Postano esorola CBS Sports College Network nyere aka nye mmemme mmemme ịgba kọleji iji nweta usoro mgbasa ozi mmekọrịta siri ike nke Postano. Ha top 10 Mmemme na-enye ohere maka mmekorita n'etiti ndị mmekọ ha na kọleji iji sụọ ụzọ na ahụmịhe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Tags: asuoyiyi curationmmekọrịta ngosipụtamobile ngosipụtapostanoọgba ọgbammekọrịta mmadụ na ibe yaelekọta mmadụ ehiweelekọta mmadụ media emmepeelekọta mmadụ media iwu emmepeelekọta mmadụ mgbidiama egwuregwu sundevil
Nov 12, 2013 na 7:27 PM
Jiri ntọala ahụ kpochapụ. Anọ m na-atụ anya na ọfịs na-aga n'ihu, mana ezighi ezi. Hlọ ha dị nso ebe ọrụ ahụ dị.